နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားနေသော အထည်ချုပ်လောကမှဒုဥက္ကဌ တစ်ဦး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားနေသော အထည်ချုပ်လောကမှဒုဥက္ကဌ တစ်ဦး
နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားနေသော အထည်ချုပ်လောကမှဒုဥက္ကဌ တစ်ဦး
Posted by annonymous on Oct 6, 2011 in Myanma News, News | 30 comments
နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင် အစိုးရမှအထူးစီမံဆောင်ရွက်နေသော ကာလတွင် သွင်းကုန်/ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အဆင်မပြေမှုများစွာတွေ့ ကြုံနေရပါသည် ဟု သွင်းကုန်/ပို့ကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားသူတစ်ချို့ထံမှ သတင်းရရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ဒုဥက္ကဌ ဒေါက်တာအောင်ဝင်း ဆိုသူသည် လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အရေးပါသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်ဟု ကြားသိရပါသည်။ ဒေါက်တာဦးအောင်ဝင်း ကိုယ်တိုင်ပင် မေပလ်ထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်၍ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည် ဟု သိရပါသည်။ အထည်ချုပ် ဒုဥက္ကဌ လုပ်၍ နိုင်ငံ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်နေသူမှာ အလွန်တရာမှ ရှက်ဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူအဖို့ မည်သည့်အမည်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ရမည်ကို ပြောနေစရာမလိုအပ်ပါ။ ဒုဥက္ကဌတစ်ဦးဖြစ်၍ ပို၍ပင် သိပါလိမ့်မည်။ ထိုသူသည် ယခုအခါ အချို့သော ကုမ္ပဏီများကို အထောက်အထားမရှိ လိုင်စင်ပိတ်ပင်ခြင်းများ ရှိနေသည် ဟု ကြားသိရပါသည်။
ဒေါက်တာဦအောင်ဝင်း ကုမ္ပဏီမှ လျှောက်ထားသော အထည်ချုပ်သွင်းကုန်လိုင်စင်များ မှာ အပိတ်ခံရခြင်းမရှိဘဲ အချို့သော ကုမ္ပဏီများအား အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ပိတ်ပင်ခြင်းသည် အလွန်တရာမှဆိုးဝါလှသော စီးပွားရေး ပိတ်ပင်ခြင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
ထိုပြင် ဒေါက်တာဦးအောင်ဝင်းအား အော်ဒါပေးထားသော အခြားကုမ္ပဏီများကိုလဲ ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိဟု ကြားသိရပါသည်။ အထည်ချုပ် ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းကို မသိဘဲနှင့် စီးပွားရေးစီမံခွင့် ရထားသူများကိုလည်း ရှက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားမှအော်ဒါများစွာ ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီများစွာ ရှိပါသည်။ စက်ရုံအသေးစားလေး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူအဖို့ လုပ်ငန်းအကြီးစားများ၏ လည်ပတ်မှု အခြေအနေကိုနားမလည်နိုင်ဟု ထင်ပါသည်။ ငါပြောတာကိုလုပ် ငါ့ကုမ္ပဏီမှ အမှန်ဟု ထင်နေသောခေတ် မရှိတော့ပါ။ လူကြီးလုပ်သူမှ မမှန်မကန်လုပ်နေသေးလျှင် ကုမ္ပဏီများ၏အပြစ်ကို လိုက်ရှာပြောနေချင်သောစရိုက်ကို 2010 တွင် ချန်လှပ်ခဲ့သင့်ပြီဟု ထင်မြင်မိပါသည် ။
နိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်/ပို့ကုန်မူဝါဒကို ပြောင်းလဲသင့်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။ သွင်းကုန်အပိတ်ခံရသော ကုမ္ပဏီများ၏ ပြစ်ချက်ကိုမှန်ကန်စွာပြောပြ၍ မည်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်သည်ကို အကြံပေး သင့်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ ကြားသိရသည်မှာ ကွန်တိန်နာဖြင့်လာသည်မှာ ပိတ်စတစ်မျိုးထဲ ဖြစ်ပါသော်လည်း သွင်းကုန်ဌာနမှ လိုင်စင်တစ်ကြောင်းတည်းလျှောက်ထားမှုအား လက်သင့်မခံဟု ကြားသိရပါသည်။ ကုမ္ပဏီများအဖို့အလွန်တရာမှအခက်အခဲတွေနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ကွန်တိန်နာမှ ထွက်ရှိလာသည့်အတိုင်း လိုင်စင်လျှောက်ထားခွင့် ရရှိသင့်ပါသည်။
ဤအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပင် အမှန်တကယ်ပင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသဘောတရားကို နားမလည်သေးသူဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။ Buyer ဘက်မှ တင်သွင်းလာသော INVOICE အတိုင်းလျှောက်ရမည်ဟု ပြောထားသော်လည်း တကယ်လျှောက်သောအခါ လိုင်စင်မပေးခြင်းသည် မည်သို့သော အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ငြင်းပယ်သည်ကို သွင်းကုန်လျှောက်ထားသူများမှလဲ နားမလည်ဟု ပြောပါသည်။ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားသူများမှ ဒေါက်တာအောင်ဝင်း ကုမ္ပဏီမှ လျောက်ထား သောပုံစံကို ကြည့်ချင်ပါသည် ။ ရှင်းပြပါ ဆိုလျှင်လည်း လက်မခံပါ။ လိုင်စင်များ ထုတ်မပေးသည့်အခါ သဘောင်္ဆိုက်ကပ်၍ လိုင်စင်နောက်ကျခြင်းအတွက် အခွန်အခအပိုများ ပေးဆောင်ကြရခြင်းများလည်းရှိသည် ဟု ပြောပါသည်။
မည်သို့ပင် ASIEAN နိုင်ငံများကဲ့သို စီးပွားရေးမူဝါများပြောင်းနေပါသော်လဲ မပြောင်းလဲသော လူတစ်ချို့ကြောင့်အခက်အခဲတွေ တွေ့နေရသော သွင်းကုန်/ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများအကြောင်းကို တစိတ်တဒေသ ပြောကြားလိုက်ရပါတယ်။ရွာသားများလည်း ဝေဖန်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလည်း သွင်းကုန်ပို့ကုန်အတွက် အဲဒီ သောက်ရေးမပါတဲ့ အသင်းတွေကို ဘာကိစ္စထောက်ခံခိုင်းနေမှန်းမသိဘူး။ အသင်းသားတွေအတွက် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာမပေးတဲ့အသင်းတွေ။
ဟိုတုန်းက အစိုးရက ခလုပ်နှိပ်ချင်ရင် နှိပ်ရလွယ်အောင် ဖွဲ့ခိုင်းပြီး တမင်ခြံစည်းရိုးခတ်ထားတာတွေ။
အဲဒီမှာ နေရာတက်ရတဲ့ကောင်တွေကိုလည်း ခိုင်းကောင်းအောင် မရှိတဲ့ ပါဝါပြခွင့်ပေးထားတယ်။
ကိုယ်ကျိုးရှာတွေ၊ မယောင်ရာဆီလူးတွေအတွက်တော့ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူးနဲ့ ကွက်တိ
CMP အခွန်တွေအပြောင်းအလဲမဖြစ်ခင်ကတည်းက ဒေါ်လာတန်ဘိုးတရိပ်ရိပ်ကျဆင်းနေမှုက မြန်မာထုတ်ကုန်သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းကိုတိုက်ရိုက် အထိနာစေပါတယ်။ ဒေါ်လာတန်ဘိုးကျတာကိုကြည့်ပြီး သဘောတွေအကြီးအကျယ်ကျတဲ့ တတိယနိုင်ငံများဟာ မကြာခင်မှာဘဲ မိမိနိုင်ငံရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကိုထိလာတော့ဟန်မဆောင်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ စက်ရုံတွေတခုပြီးတခုပိတ်ရပြီဆိုတော့ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေမှာ လူသုံးကုန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ direct investment နဲ့ မတည်ငြိမ်တဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်နေကြတဲ့ပြည်တွင်းကလုပ်ငန်းရှင်တွေရော၊ ပြည်ပကရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသူတွေက အခုအပင်စိုက်အခုအသီးစားရတဲ့ ချက်ချင်းအကျိုးပေါ်တု့ tradingကိုဘဲလုပ်ကြပါတယ်။ ကာလရှည်အကျိုးပြုမဲ့ industrial development ကိုစိတ်မ၀င်စားကြပါဘူး။
ကိုအောင်ဝင်း ဟာစိတ်ရင်းကောင်းသူတဦးဖြစ်ပေမဲ့ သူလဲလေလောကီသားဘဲ။ (ဗိုလ်ချုပ်ဘသော်ရဲ့ အသိုင်းအ၀န်းထဲကမို့ ခေသူမဟုတ်ကြောင်းပါ။)
ဒီပို့စ်ထဲမှာရေးထာသလို ကွန်တိန်နာတစ်စီးလုံး ပိတ်စပဲ လာလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လိုင်စင်လျှောက်ရင် ပိတ်စ တစ်မျိုးတည်းမလျှောက်ခိုင်းတာပါ။အဲဒါကတော့ မူအရမှန်ပါတယ်။ လက်ခစား စနစ်အနေနဲ့ import ၀င်လာရင်ပိတ်စ တစ်မျိုးတည်း ၀င်လို့မရပါဘူး။ ကျန်တဲ့ ချည်လုံး၊ကြယ်သီးတို့ ပါရပါတယ်။ဒေါက်တာအောင်ဝင်းရဲ့ သတ်မှတ်ချက် ကမှန်သင့်သလောက်မှန်ပါတယ်။သူက နဲနဲတော့ တင်းကြပ်တာ တစ်ခုပါပဲ။ ဒီပို့စ်ကို ရေးတဲ့ သူက ကိုယ်တွေ့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။တစ်ယောက်ယောက်က ရေးခိုင်းတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။
annonymous ရေ မှန်လိုက်တာဗျာ
နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းစဉ် ဟိုဘက်က ပစ္စည်းတစ်မျိုးစီ၏ ကုန်ကျစရိတ်
performer invoice အရ တင်ပြ လျှောက်ထားတဲ့
u/price တွေကိုလဲ ဒီလူကြီးကပဲ ဒီဟာများတယ်
ဟိုဟာနည်းတယ် နဲ့ ဈေးနှုန်းတွေလိုက်ပြင်ခိုင်းပါသေးတယ်
ဟိုနိုင်ငံက တစ်ကယ့်ပေါက်ဈေး ဈေးနှုန်းကို သူသဘောကျ ပြင်ပေးခဲ့ ရပေါင်းများပါပြီ။။
သူပြောနေကြလက်သုံးစကားကတော့ “ငါကုမ္မဏီမှာဆို ဈေးအဲလောက်မပေးလို့မရဘူး´´ဆိုတာပါပဲ
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ပိတ်စဈေးတွေမှာ တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ဈေးက အမှန်ဆိုရင်
1MTR – 0.75US လောက်ပဲ၇ှိပေးမယ် အခုချိန်ထိ ပိတ်စဈေးကိုအမှန်ပြောပြီးလျှောက်လို့မ၇တာပါပဲ
အခုချိန်ထိ 1 MTR- 1.50 USD အဖြစ် သူတို့အကြိုက်လိုက်လုပ်နေ၇တုန်းပါ
ဒါဆိုလည်း သူပြောတဲ့ ဈေးနဲ့ပဲ invoice လုပ်လာပေါ့။ဘယ်ဈေးနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် cmp မို့ ဘာမှမထိခိုက်ဘူးမို့လား။အလွန်ဆုံး သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး 50000 ဆောင်ရတာပဲရှိတာလေ။ဒါကလည်း လိုင်စင်တစ်စောင်လုံးနဲ့ ယှဉ်ရင်မပြောပလောက်တဲ့ ငွေကြေးလို့ထင်တာပဲ။နောက်ပြီး ဒါက နိုင်ငံတော်က ရတာလေ။ လိုင်စင်တစ်ကယ်လိုချင်တဲ့သူဆိုရင်ပြောတာပါ။သူ့အကြိုက်လုပ်လာကြတာပဲ။ဒါကတော့ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးရှိတတ်တာ သဘာဝပါပဲ။
ကိုဘီလူးရေ ဒေါက်တာအောင်ဝင်းဘက်က လိုက်ပြောလို့ တစ်မျိုးတော့မထင်ပါနဲ့။လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ စာနာပြီးပြောပေးတာပါ။ဒီလူကြီးက ရစ်တာလဲအမှန်ဆိုတာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒါက အင်တာနက်ပေါ်မှာ နာမည်ပျက်ရလောက်အောင် မဆိုးဝါဘူးလို့ထင်လို့။ နောက်ပြီး လိုင်စင်တွေလဲ လျှောက်နေကြရတာပဲလေ။ မရတဲ့ Co., မရှိဘူး ထင်လို့ပါ။ဒီနေ့ ထောက်ခံချက်မရလဲ နောက်နေ့ ရကြတယ်လေ။ ကိုယ့်ဖိုင်မသေချာရင် ကြိုပြီး ထောက်ခံချက်ယူကြတယ်မှတ်လား။
ဒေါ်မမကြီး ကတော့ ဘယ်ရုံးကလဲတော့မသိဘူးဗျ
ဒီလူကြီးဒီလောက်မှန်နေရင် သူ့စက်ရုံကရောမှန်လို့လား ဒီစကားကိုမေးရလိမ်မယ်
သူကျတော့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့လုပ်နေပြီး မြန်မာအမည်ခံပဲမဟုတ်လား
(CMP)မှာ မလိမ်ဘဲ မညာဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့ စက်ရုံရှိရင်ပြပါ
လိုင်စင်ရောင်းမစားတောင်း အနည်းနဲ့အများ ပစ္စည်းကတော့လွဲသွားတာပဲ ဗျ
eyelet ကို snap button နဲ့တော့ လိမ်ပြီးထုတ်ဖူးတဲ့သူတွေချည်ပဲဗျ
(CMP) ဘယ်လောက်မှန်နိုင်လို့လဲ အမှန်ကြီးသာလုပ်ရရင်
ကျုပ်တို့တွေ ဘာOrder မှ ချုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး..။။
မမကြီးပုံစံကြည့်ရတာ လူသားအချင်းချင်းစာနာတက်တယ် ထင်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ် ဒေါက်တာ ဦးအောင်ဝင်းကို နာမည်ပျက်စေလိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့တော့ တင်တာမဟုတ်ပါဘူး
မမကြီး က ဒေါက်တာ ဦးအောင်ဝင်း ရစ်ပြီး လိုင်စင်မရလို့ ငိုတဲ့ ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းတွေကို မမြင်ဘူးသေးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်ကော မမကြီး ဘယ်သူဘက်ကနေ ပြောပေးမလဲလို့ သိချင်ပါသေးတယ်။ သူရစ်တာကိုဝန်ခံပေးတဲ့ အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် မျှမျှတတတွေးခေါ်စေချင်ပါတယ် ။
ခုခေတ်မှာမကျေနပ်တာ ရှိရင် အင်တာနက်ပေါ်တင်ခွင့် ရှိနေတာမို့ လို့ ဝေဖန်ချက်လေးကို ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ မတရားတာလေး တစ်ခုကို ပိုစ်ပေါ်တင်ပေးယုံလေးတင်ပါ
ဘယ်သူတွေ ငိုလည်းဆိုတာ သိပါတယ်။မြင်လည်းမြင်ဖူးပါတယ်။အပြင်မှာလည်း နဲနဲတော့ ခင်ပါတယ်။
မမကြီး မောင်မျိုးကို မေးပြီပီလား
အလကားနေ လဘ်စားပြီးမပေးတာမှ မဟုတ်တာ အမြဲတမ်းဝင်နေရတဲ့လိုင်စင်ပဲ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရင် မပေးပဲရှိပမလား?
လဘ်စားတဲ့ခေတ်တွေ ရှိသေးတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာလား။
ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာ တင်းကြပ်တဲ့ မူဝါဒတွေကနေ ဖြေလျှော့ပေးဘို့နဲ့ ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကြားမှာ ညှိနှိုင်းပေးဘို့ နေပြည်တော်ထိအောင်သွားတင်ရတဲ့ လိုင်စင်ကိစ္စတွေမှာ မှန်ကန်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဘဲပါသွားခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေ အချိန်၊ငွေမကုန်စေဘို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်း အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ ရှိနေတယ်လို့မြင်ပါတယ်၊
ဥပမာ ပဲအသင်းရဲ့ ထောက်ခံချက်ပါရင် လိုင်စင်လျှောက်တဲ့အခါ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ တစ်ပတ်အတွင်းကျပါတယ်၊ဒါကြောင့်လည်း agent တွေက ထောက်ခံချက်ပါအောင်တောင်းခိုင်းပါတယ်၊
ဆေးအသင်းဆိုရင်လည်း ပုဂ္ဂလိကဆေးဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကို သင်တန်းတွေပေးခြင်းဖြင့် အရေးတကြီးသိသင့်တာလေးတွေ သိသွားအောင် လုပ်ပေးနေတာပါ၊
CMP လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း CMP အယောင်ပြပြီး အခြားပစ္စည်းသွင်းတာတွေ၊ပိတ်ပိုသွင်းတာတွေ လုပ်နေကြတဲ့ မသမာသူတွေလည်းရှိနေကြတော့ သူ့အရပ်နဲ့သူ့ဇာတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊
ဥပဒေတွေ စနစ်တကျရှိပြီး ၀န်ထမ်းတွေကလည်း စေတနာအပြည့်နဲ့ အစစ်အမှန်ကူညီပါရစေ ခေတ်ရောက်သွားရင်တော့ ဒီအသင်းတွေ မရှိလည်း ရသွားမှာပေါ့၊အခုထိတော့ ……………….
ကြိုက်တယ်ဗျို့..။ ဒီတက်မရ ဟိုတက်နဲ့လှော်၊ ပို့စ်တခုပိတ်ရင် နောက်တခုနဲ့ ဆက်ရေး၊ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ် သဂျီးရေ..။ ကြိုးစားလိုက်အုံး နောက်ထပ် ဆယ်နှစ် ဆယ်နှစ် (ကျော်ဟိန်းလေသံဖြင့်ဖတ်)။ ကဲ..ဘောလုံးကတော့ အီးတုံးကွင်းထဲ ရောက်နေပါပြီ။ သရေကျနေရင် အချိန်ပိုနဲ့ ပယ်နယ်တီ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဘောလုံးဆိုတာ ဘောသမားတင်မက နည်းပြနဲ့ပရိတ်သတ်ပါဝင်ကန်မှ နိုင်မှာဖြစ်လို့ စိတ်ပါဝင်စားသူအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
သူတို့အချင်းချင်း လုပ်ငန်းပိုင်းမှာ ငြိခဲ့တယ်ထင်တယ်
No No “ဘီလူးကြီး”ogre
I mean, လုပ်ငန်းပိုင်းမှာ ငြိခဲ့တယ်ထင်တယ် between E Tone & ma ma gyi.
Please check “ကြောင်ကြီး ” comment thoroughly,
Dear “ဘီလူးကြီး”ogre ,
I think you didn’t read “Without You” post.
In this post, they fiercely fight against each other.
((“““ဘာလို့များ နောက်ပိုင်း လုပ်ရကိုင်ရ ခက်ခဲအောင် ပြောနေရတာလဲ။””))
ဧကန်န တော့ မမကြီးလဲ ခက်မှာစိုးနေတယ်နဲ့တူတယ်
တစ်ကယ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကတော့ မှန်တာကိုပဲကြိုက်တယ် ဗျ
အမည်ခံ တွေသာ ခက်လာမှာကိုကြောက်တာလေ
ဟုတ်ကဲ့.. တိုက်စစ်မှူးအီးတုံးက သူ့ကွင်းထဲရောက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို ဒူးနဲ့တချက်ဖမ်းထိန်းပြီး ပြန်လည်ကန်တင်လိုက်တာဆိုရင် တဖက်ကွင်းသုံးချိုးနှစ်ချိုးနားကို ရောက်သွားပါပြီ။ ဒီတခါတော့ မမကြီးကနေ ဘယ်လိုကစားကွက်ဖော်ပြီး တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်မလဲဆိုတာ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ကနေ သုံးသပ်သူအကဲဖြတ်တဦးအနေနဲ့ ပြောချင်တာ ရန်သူ့တိုက်စစ်စစ်ကို တိုက်စစ်နဲ့ ပြန်တုံ့ပြန်ခြင်းထက် သူတိုက်စစ်ဆင်လာရင် ကိုယ်ကခံစစ်နဲ့ဟန့်တား၊ ပြီးရင် လျှပ်တပြက်ထိုးစစ်ပြန်ဆင်ခြင်းဖြင့် ကစားပွဲရသပိုမြောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွင်းလယ်ဒိုင် သဂျီးကတော့ ရခိုင်ပွဲကရထားတဲ့ ပင်ပန်းမှုအရှိန်နဲ့ ဝီစီတောင်မှုတ်ဖို့တောင် အားမရှိတော့ပါဘူး။ နှစ်ဖက်အသင်းအနေနဲ့ ပွဲချောင်တုန်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး အားကစားသမားစိတ်ဓာတ် အပြည့်နဲ့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ကစားပေးစေချင်ပါတယ်။ ကွင်းပိုင်ရှင်ဘီလူးကလည်း ပွဲကြည့်စင်မှာ လူပိုများလာလို့ သဘောကျနေပါတယ်။
( မယားငယ်တုံးပိသံနဲ့ ) ဆိုတဲ့ကန်ချက်က
ရွာသူ၊ရွာသားအပေါင်းတို့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေမဲ့အစား ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကိစ္စလေးကို အပေးအယူမျှတစွာနဲ့ဝေဖန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ လူတွေဆိုတာအမြင်တွေမတူညီနိုင်ဘူး ဆိုတာ ဒီပိုစ်လေးမတင်ခင်ကတည်းက သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတော့မဖြစ်စေချင်တာပါ။
ဝေဖန်ပါ မည်သူမှားသည် ဖြစ်စေ ၊ မှန်သည်ဖြစ်စေ ဝေဖန်ချက်ကို ဖတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။
12. Post/Comment တို့ကို စာဖတ်သူတို့အတွက် အကျိုးရှိ/ကျန်ရစ်စေမည့် စာများသာရေးကြပါရန်။
ကိုရင်စည်သူ(ခ) အတောင်မပါတဲ့ ငှက်ကြီးပဲ ကျန်တော့တယ်..
ဟေ့ဟေ့ မမဂျီး.. အဲလို မဆိုင်တာ မပြောနဲ့။ ကျုပ်ယူရင်လည်း တရုတ်မ ယူမှာ။ ဒါပေမဲ့ ခလေးတွေကို မြန်မာပြည်မှာ ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့လို မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတွေ တရုတ်တွေကိုယူမှ ဒင်းတို့အမျိုခံရမဲ့ အန္တရယ်ကို ကာပြန်နိုင်မှာပေါ့။ မွေးလာတဲ့ ခလေးဆိုရင် ကုလားပြည်ပို့ စာသင်ခိုင်းမယ်။ ကုလားနဲ့ ယူခိုင်းမယ်။ ဒါဆို မျိုးဆက်နောက်တခုမှာ သာကီဝင်မျိုးဒို့မြန်မာ ပြန်ဖြစ်လာပြီ..။
(အဟဲ ) နေရာမှားတင်မိသွားတယ်
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ပို့စ်တင်တဲ့ ပိုင်ရှင်ကို အားနာပါအုံး ပို့စ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ ထည့်မပြောကြပါနဲ့ ပို့စ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေကိုပဲ ဝေဖန်ပေးကြပါ ။အပြုသဘောနဲ့ ဆွေးနွေးခိုင်းတာ အခု အပျက်သဘောတွေ ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတာ ဒီဆိုဒ်အတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။ တောင်းပန်ပါတယ် ။ အဖွဲ့သားအချင်းချင်း စည်းလုံးမှုလေး တော့ ထားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရွာသားအကြောင်း ကို ဖော်ထုတ်ပြတာတော့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။ နှစ်ဖက်လုံးက မမကြီးကိုရော ၊ ကိုကြောင်ကြီးကိုရော etone ကိုရော စိတ်လျော့ ပေးပါလို့ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်မှ အနူးအညွှတ် မေတ္တာရပ်ခံတောင်းပန်ပါတယ်။ အချင်းချင်း ဖြစ်နေတာ ကို မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာပါဘူး။တစ်ရွာတည်းသား အချင်းချင်း ညီညွှတ်မှုလေး ရှိစေချင်ပါတယ်။
ထင်းချောင်းလေး လို တစ်ချောင်းချင်းဆီအချိုးမခံပဲနဲ့ ထင်းစည်းလေးအဖြစ်နေကြရအောင်နော်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်တယ် ထင်ရတဲ့.. Comment တွေ.. ဖျက်လိုက်ပါကြောင်းနဲ့..
—– Admin ——
မဆိုင်ဘူးလေ သဂျီးရဲ့။ ခြေစမ်းပွဲမှ မဟုတ်တာ၊ အဆင့်မြင့်တန်း ချန်ပီယံလုပွဲဆိုတော့ နဲနဲ့တော့ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရမှာပေါ့။ ကွင်းပိုင်ရှင်ဘီလူးရေ ကွင်းလယ်ဒိုင်က အဖိုးကြီးဆိုတော့ ကြောက်တတ်ပုံရတယ်။ နေ့တွက်ရှင်းပြီး ကွင်းထဲကနေ ထုတ်ပစ်လိုက်ပါလား။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ၊ ပွဲကပိုကောင်းလာပါပြီ။ အခုအချိန်မှာ ဝင်ကြည့်အုံးမယ်ဆိုရင်းလည်း မှီပါသေးတယ်၊ ပထမပိုင်းတောင် မပြီးသေးပါဘူး။ အောင်ကြူးကုမ္မဏီကလည်း ကြောင်ရိုင်းတံဆိပ် လစ်ပိုဗီတန်အားဖြည့်အချိုရည် ပုလင်းများကို သေတ္တာလိုက် နှစ်ဖက်အားကစားသမားများအတွက် စေတနာအပြည့်နဲ့ လှူဒါန်းသွားပါတယ်။
Some comments are DELETED due to Inappropriate Words.